15 Lone Wolf Anime Characters na The Kasị Mma - Ndị Ọzọ
15 Lone Wolf Anime Characters na The Kasị Mma
Lone Wolf’s bụ ndị kacha anime ihe odide ị ga-ahụ. Maka na ha achọghị enyemaka, ma ọ bụ 'ịdabere' na ndị ọzọ iji bie ndụ ha.
Na ha karịsịa achọghị ndị ọzọ ka ha nwee obi ụtọ, nchekwa ma ọ bụ 'ezigbo' banyere ndụ ha ma ọ bụ ebe ha na-aga.
Mana nke ahụ apụtaghị na anụ ọhịa wolf anaghị eso ndị ọzọ akpakọrịta. Ma ọ bụ na ha enweghị 'ndị enyi.'
Ọ bụ Kedu ha na-ebi ndu na-eme ka ha wolf wolf, na nke ahụ bụ ihe m ga-egosi na nke a post.
Ka anyi nweta ya.
15 N'ime Ihe nkiri kacha mma Anime Wolf:
1. Laxus Dreyar (Fairy Tail).
Laxus anaghị eche banyere 'obere okwu' na ịnọnyere ndị mmadụ 24/7. Ọ bụ onye dị mma nke dị mma n'onwe ya, na-eme ihe nke aka ya na ibi ndụ na usoro ya.
Nke a apụtaghị na o nweghị obi, mmasị na ndị ọzọ ma ọ bụ na ọ nweghị ike iso ndị mmadụ na-emekọrịta ihe. N'ezie - ọ bụ otu n'ime ihe kachasị nwere obi ike ihe odide na Fairy Tail.
Ma… ọ oke onwe ya ịdabere na ndị ọzọ, na achọghị onye ọ bụla na-agwa ya ihe ọ ga-eme.
Ọ na-arụ ọrụ ma na-arụ ọrụ nke ọma n'onwe ya.
Njikọ: Kachasị akụkọ ifo Akụkọ ifo
2. Triela (Nwanyị Gunslinger)
Ihe ijuanya Triela, n'ihi na ị gaghị akpọ ya 'otu anụ ọhịa wolf' na ileba anya mbụ.
Ọ na-arụ nnukwu nwanne ọrụ maka ọtụtụ ihe odide na Gunslinger Girl. O tozuru oke ma tolite maka afọ ndụ ya, ka emechara.
Ma n'okpuru - ọ bụ ụdị naanị anụ ọhịa wolf. Onye nweere onwe ya ma ọ dịghị mkpa ka onye ọ bụla gbara ya gburugburu iji mee ihe, nwee ahụ iru ala ma ọ bụ ibi ndụ ya n'ụzọ ga-eme ya obi ụtọ.
Ọbụna ma ọ bụrụ na Triela enweghị ndị ọzọ gburugburu ịkpọ oku ma ọ bụ 'onye ndụmọdụ', ọ ga-eme nke ọma. N'ihi na ọ na-enwe ntụsara ahụ na akpụkpọ ahụ ya ma ọ bụghị nọ ná mkpa.
Njikọ: Nwere ike ịnụtụbeghị ihe ngosi Anime 22 ndị a
Sesshomaru na-bụ n'ezie demon lord, nke pụtara na ọ bụ dị ike na ihe odide ole na ole dikwa ike ya.
Could nwere ike ịsị na nke a bụ ihe kpatara na ọ bụ naanị anụ ọhịa wolf ma họrọ ịga ije n'okporo ụzọ nke aka ya, na-achọ ndị iro siri ike ịlụ ọgụ. Ma n'ezie - ọ bụ naanị nọọrọ onwe ya ma nwee mmasị ịme ihe n'onwe ya.
Nke ahụ bụ ihe na-eme ka otu anụ ọhịa wolf banye - Sesshomaru, ọ bụ ezie na nke ahụ gbanwere ntakịrị n'ụzọ.
Houtarou Oreki bụ onye na-ebubata ihu igwe bụ onye kacha nọrọ n'ụlọ ma gụọ akwụkwọ. Ma ọ bụ na-akpakọrịta obere dị ka o kwere mee iji chekwaa ume ya, ma jiri ya mee ihe Ọzọ na-arụpụta ihe.
Ọ bụ nwoke maara ihe ma nwee ọgụgụ isi. Ma n’agbanyeghi na obu otu wolf - nke ahu agaghi ekwu na o bughi dabere na ndị ọzọ.
Ọ maara etu esi agagharị n'ụwa, soro ndị mmadụ na mmekọrịta yana ọbụna ịkparịta ụka n'ụzọ ga-amasị gị. N'ihi na Houtarou ji nlezianya ma na-ege ntị karịa ka ọ na-ekwu.
Dị mkpa: Nkọwa 20 ’ll Ga-ahụ n'anya Site Anime: Hyouka
5. Uryuu Minene (Diary Future)
Uryuu Minene nwere ihe dị iche iche kpatara ọ bụ wolf wolf na anime: Ọdịnihu. N'ihi na ọ nwere nzụlite siri ike, jikọtara ya na ịda ogbenye nke kpaliri ya na sh * tty direction.
Nke ahụ na-eduga ya ntụkwasị obi mmadụ ole na ole, ma ọ bụrụdị. Ma tinye ihe mgbochi nye onye ọ bụla nke na-achọ ịbịaru ya nso.
N'elu nke a na-ada ụda na-adịghị mma, mana ọ bụ n'ezie nke dị mma ma na-arụ ọrụ nke ọma maka otu o si akpụzi agwa ya.
O siri ike, nwee obi ike, nwee obi ike ma ghara inye F. Ọ bụkwa ya mere o ji ebi ndụ n'ụzọ ọ chọrọ ibi, yana nnwere onwe ịghara ịza onye ọ bụla maka omume ya ma ọ bụ nsonaazụ ya.
Njikọ: Ihe 21 Na-adasi Ike You gaghị echefu Mirai Nikki
6. Genos (Otu Punch Nwoke)
Genos kwuru ya n'onwe ya: Abụ m naanị cyborg na-alụ ọgụ maka ikpe ziri ezi. Ya mere, ọ na-aga n'ekwughị na ọ bụ ụdị naanị anụ ọhịa wolf.
Ọbụna tupu Saitama ọ bụ ụdị mgbe niile iji bie ndụ ya ma mee uche ya.
Ọ ga - ejide ụwa n'onwe ya ma ọ bụrụ na ọ ga - eme ya, ọ bụrụ na ọ pụtara ịme ihe ziri ezi na imezu echiche ya. N'agbanyeghị etu o si dị ize ndụ, nzuzu ma ọ bụ ihe a na-enyo enyo.
Shinya bụ nwoke ahụ na nkuku na klọb nke anaghị agba egwu, mana ị ga-ahụ ya ka ọ na-a smokingụ sịga ma na-atụ oyi n'onwe ya. Na-echebara azụmahịa ya echiche.
Nke ahụ bụ otu anaghị eche oke echiche ọ bụ ya na-akọwa agwa ya Ọrịa Psycho.
Dị ka ọtụtụ ndị uwe ojii nọ na Psycho Pass, Shinya bụ “onye aghụghọ” e webatara n'otu egwuregwu… ijide ndị omekome ndị ọzọ.
Ma n'agbanyeghị na ọ dị jụụ na ndị otu ya na mmadụ niile, O doro anya na ọ bụ nwa okorobịa na-ebi naanị ya.
Ọ bụghị n'ihi enweghị nchebe, mana n'ihi na ọ dị mma na akpụkpọ ahụ ya na ntakịrị isi ike ịdabere na ndị ọzọ.
Kyoko Sakura na-ebi ndu na-enweghị akwa ụta. Ma buru ibu maka omume ya. N'ihi ya - ọ sweụrụ iyi mgbe ka onye obula tinye aka na ahia ya ma obu nsogbu ya.
Ọ bụkwa ya mere o ji ebi ndụ dịka otu anụ ọhịa wolf, na-ahọrọ ịghara itinye onye ọ bụla n'ọrụ ya.
Nke ahụ ọ dị mma na-agbanwe, mana na-anọ otu ihe ahụ usoro ahụ na-aga n'ihu.
Mana Kyoko nweere onwe ya ịhọrọ mgbe ọdachi dakwasịrị ya n'oge gara aga. Na nke ahụ bụ ihe na-eme ka àgwà ya na omume ya na-amasị ya n'etiti ndị niile ụmụ agbọghọ anwansi na Madoka Magica.
Kenshin Himura bụ naanị samurai. Na-eche ụwa n'anya site na ya onwe ya na-eme ezi ọrụ iji kpuchie maka ya n'oge gara aga.
Emechara - aha otutu 'nwoke ogbu mmadu' adighi abia na mberede. Ọ bụ gburu Ọtụtụ mmadụ, ọ bụrụgodị na ọ bụghị nzube ya.
Mma agha ya dị n'akụkụ nke gbanwere, yabụ ọ bụrụ na ọ ga-eji ya, ejiri ihu njedebe nke agụba ahụ mee ihe… na-eme ka ọ ghara ikwe omume igbu ma ọ bụ belata onye ọ bụla ọ na-emeso.
Could nwere ike ikwu na ndụ ya gara aga bụ otu n'ime mkpali maka ịbụ chụpụrụ ime ihe nanị ya. Ọbụna ma ọ bụrụ na e nwere ndị gbara ya gburugburu bụ ndị dị njikere inyere ma ọ bụ ime ka ọ kwupụta mmetụta ya n’ebe ha nọ.
Shogo Makishima bụ anụ ọhịa wolf nkịtị, ebe ọ bụ onye omekome na onye na-egbu egbu. Na isi na-egbu egbu na Ọrịa Psycho n'ezie.
Ọ na-adị ka ọ naghị adabara ebe ọ bụla, na onye ọ bụla. Karịsịa na ọha mmadụ nke nkà na ụzụ na-achịkwa Psycho Pass, nke ndị na-arụ ọrụ site na ígwè ọrụ na ígwè ọrụ maka ọtụtụ akụkụ.
Ọ na-eche na ọ nwere ntụpọ, yabụ nke ahụ bụ echiche ya maka ịbụ onye nnupụisi na enweghị isi na-egbu ndị aka ha dị ọcha iji mee isi ihe.
E wezụga craz, ọ bụ nwoke nwere ọgụgụ isi nke maara nke ọma ụwa, ya onwe ya, na ihe kwesịrị ịgbanwe.
Ọbụna ma ọ bụrụ na nke ahụ pụtara iji ụzọ ịchọ ọdịmma onwe onye nanị iji ruo ihe mgbaru ọsọ ya.
Makina Hoshimura abughi onye nso, ma ghara ikwuputa okwu efu dika 'Enwere m dike nke ikpe ziri ezi' n'ihi na ọ maara eziokwu dị n'okwu ahụ .
Ọ na-alọ ụwa dị ka 'ndị nwụrụ anwụ dị ndụ', ekwuru na ọ bụrụ na o gbuo ihe karịrị 100 Shikabane, ọ ga-abụ mmadụ ọzọ. N'ihi ya, o ji obi ebere gbuo ọtụtụ mmadụ dị ka o kwere mee, n'echeghị echiche nke abụọ ma ọ bụ kwa ụta.
Ihe mgbu na ịdị arọ nke omume ya na ndụ ya gara aga bụ otu n'ime mkpali siri ike maka ịnwe onwe ya.
kacha mma gosiri anime niile oge
Mana ọbụlagodi - ọ nwere ike ijikwa onwe ya na ibi ndụ na usoro nke aka ya.
12. Katsuragi Keima (Worldwa Naanị Ya Maara )wa)
Katsuragi Keima na-egwu egwuregwu ụbọchị niile. Mmekọrịta sims. Ma nke ahụ bụ ndụ ya niile na-agagharị.
O kechibidoro ụwa nke mkpakọrịta sims na ọ naghị ewere ụmụ agbọghọ 3D kpọrọ ihe.
Ọ bụ ya mere na ị na-ahụ naanị ya mgbe niile. Na ọbụlagodi mgbe ibé ahụ gbapụrụ, ọ bụ ka otu anụ ọhịa wolf. Ime ihe nke aka ya na ibi ndu dika ochicho ya si di.
Ọ dịghị onye nwere ike ịgwa ya ihe ọ ga - eme ma nke ahụ gosipụtara site na omume ya.
Vash stampede ahụ bụ otu n'ime ihe ndị kasị dị mma odide na akụkọ ihe mere eme Anime. Ọ bụ ụdị mmadụ nke Natsu Dragneel, n'ihi na ọ bụ na enwe obi ụtọ ma nwee mkpali.
Mana eziokwu na ikpe Vash bụ - ihu 'obi ụtọ' si na a oge ochichiri ná ndụ ya.
Nchekwube ya bụ n'ihi na nke oge siri ike o mesoro ya.
Mụmụ ọnụ ọchị na inyere ndị ọzọ aka ịmụmụ ọnụ ọchị na inwe mmetụta dị mma bụ akụkụ nke amara ya. Ọbụna ma ọ bụrụ na ọ pụtara njem onwe ya na ọ bụchaghị ịbụ enyi onye ọ bụla na njem ahụ.
14. Coyote Starrk (lecha ọcha)
Akụkụ Stark nke ọnwụ bụ owu ọmụma. Yabụ ọ bụrụ na ị lelee ịcha ọcha ọ gaghị eju gị anya ịhụ Stark na ndepụta a.
N'ime Espada niile, ọ dị ka anụ ọhịa wolf dịka Ulquiorra Cifer. Ma ọ bụ ọbụna Grimmjow.
Ọbụna na ihu nke ọnwụ, Stark ka na-ajụ ịdabere na onye ọzọ.
N'ezie - owu ọmụma (na ọbụna ya otu anụ ọhịa wolf njirimara) bụ kpom kwem otu esi egbu ya n’ikpeazụ.
Njikọ: Kachasị Anime na-ehota Site ịcha ọcha
15. Saichi Sugimoto (Ọlaedo Kamuy)
Saichi Sugimoto bụ onye bụbu onye agha agha, na-eche mba n'ihi na stacks ọlaedo, iji mee ka onye ọ bụla bara ọgaranya. Ma ọ bụghị ya naanị otu na-eme ya.
Ndị ọzọ karịa Asirpa onye ọ na-ezute na nkeji ole na ole mbụ nke Golden Kamuy, ọ na-eme ya nwe ihe. Nwere obi ụtọ were ụwa dịka anụ ọhịa wolf ọ nọ.
Ọ gaghị arịọ maka enyemaka onye ọ bụla, ọbụlagodi na ọ ga-egbu ya. Nnwere onwe ya na njikere ya bụ akụkụ nke amara ya na ihe na-eme ya dị ize ndụ.
Aki Adagaki (Masamune Kun No Imegwara).
Allen Walker (D. Grey Nwoke).
14 Mmasị ndị na-adọrọ mmasị n’etiti Anime na ndụ n’ezie
5 Ihe Bụ Eziokwu Ọ bụrụ na Love Hụrụ Anime n'Anya (Nke ahụ Kwesịrị Bratụ Isi)